Warbixin: Cristiano Ronaldo 9 Abaal-marrin ayuu ku Guuleystay Sannadkan dhammaanaya ee 2016..!
HomeWararka MaantaWarbixin: Cristiano Ronaldo 9 Abaal-marrin ayuu ku Guuleystay Sannadkan dhammaanaya ee 2016..!
28/12/2016 Samatar Mohamed
Maaha wax fudud inaad hal sanno aad hanato abaal-marrino kala duwan kuwaas oo aad dedaal, guulo iyo karti aad la timid aad ku hesho, laacibka kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Portugal Cristiano Ronaldo waxa uu ku guuleystay 9 abaal-marrinood sannadkan gaba-gabada ah ee 2016.
CR7 ayaa abaal-marrintiisi 9-aad waxa uu gacanta ku dhigay Salaasadii shalay kadib markii ay Globe Soccer u aqoonsatay ciyaar yahankii sannadka. Ronaldo imika waxa uu ku guuleystay Ballon d’Or, tiisii 4-aad, ciyaar yahanka Europe ugu wanaagsan, World Soccer, Four Four Two iyo ESPY oo ay bixiso ESPN.
Intaas kuma eekaa sidoo kale wuxuu toddobaadkii hore uu qaatay CR7 laacibkii ugu wacnaa ee FIFA Club World Cup. Markan waxaa uu la loolamayey wiilka ay loolamaan ee Lionel Messi, xiddiga Leicester City Jamie Vardy, Gonzalo Higuain iyo Antoine Griezmann.
Waa markii 4-aad ee uu ku guuleysto Ronaldo jaa’isadda Globe Soccer, hore waxa uu u helay sannadihii 2011, 2013 iyo 2014. Sidoo kale Ronaldo waxaa loo magacaabay European Sports Person of the Year waxaana u doortay 27 waarbaahin caalami ah, waana markii ugu horeysay oo uu ciyaar yahan kubadda cagta ahi uu ku guuleysto.